eHimalaya Online || News from nepal » दैनिकी नुहाउनुहुन्छ? दैनिक नुहाउदा पनि हुन सक्छ हानी ।
दैनिकी नुहाउनुहुन्छ? दैनिक नुहाउदा पनि हुन सक्छ हानी ।
२०७७ कार्तिक ८ गते शनिवार ०५:४५
नुहाउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि मानिन्छ तर, जाडो मौसममा मानिसहरु अलि कम नुहाउने गर्छन् नुहाउन परे पनि पानी तताएर नुहाउने गर्छ्न । गर्मी महिनामा कतिले दैनिक नुहाउने गर्छन् भने कतिले केही दिन बिराएर नुहाउने गर्छन् । तराई...
नुहाउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि मानिन्छ तर, जाडो मौसममा मानिसहरु अलि कम नुहाउने गर्छन् नुहाउन परे पनि पानी तताएर नुहाउने गर्छ्न । गर्मी महिनामा कतिले दैनिक नुहाउने गर्छन् भने कतिले केही दिन बिराएर नुहाउने गर्छन् ।
तराई क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी हुने हुँदा दैनिक ३ पटकसम्म नुहाउने पनि कसैको बानी हुन्छ । हामीले सुन्दै आएअनुसार नुहाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो । तर, दिनदिनै नुहाउनु स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो नहुने कतिपय चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कस्ता असर पर्न सक्छन् त ?
सकभर दिनदिनै ननुहाउनुस्: हाम्रो छाला सफा राख्नका लागि हामीले दैनिक नुहाउन जरुरी छैन । किनकि, हाम्रो छालामा भएको एक तत्वले छाला सफा गरिरहेको हुन्छ । दिनहुँ नुहाउदा यस्तो तत्वलाई पनि नोक्सान हुन्छ । तर, धेरै काम गर्दा या जिम गर्दा पसिना आएको भए नुहाउनु पर्ने हुन्छ । किनकि, हामीलाई पसिनाले पनि असर गर्छ ।
छालामा असर पुग्छ: दिनहुँ नुहाउँदा छाला रुखो हुने र यसको प्राकृतिक नरमपन पनि मासिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
छालामा भएको एक प्रकारको ब्याक्टेरिया नष्ट हुने हुँदा छालाको सुरक्षा कवच पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । उक्त ब्याक्टेरियाको रासायनिक उत्पादनले एक प्रकारको टक्सिन निकाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो छाला सुरक्षित हुन्छ ।
जाडोमा तातोपानीले नुहाउनु गलत: कतिपयले जाडो मौसममा तातो पानीले नुहाउने गर्छन् । यसले छालाको सौन्दर्यमा असर पुर्‍याउने चिकित्सकको सुझाव छ ।
तातो पानीले नुहाउँदा छालाको प्राकृतिक तेल पनि नोक्सान हुन्छ । दिनहुँ नुहाउने गर्नुभएको छ भने साबुन या स्याम्पुको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २०७७ कार्तिक ८ गते शनिवार ०५:४५